တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းများမပြုလုပ်ဘဲဖိုင်များကို PDF တစ်ခုတည်းထဲသို့မည်သို့ပေါင်းစည်းရမည်နည်း Androidsis
ဖိုင်များစွာကို PDF တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲ
သေချာတာပေါ့ မင်းဒီပြproblemနာကိုကြုံဖူးလား။ သင်ခွင့်ပြုထားသောဖိုင်တွဲအရေအတွက်အများဆုံးထက်ပိုသောကြောင့်အီးမေးတစ်ခုတည်းဖြင့်သင်ပို့ရန်လိုအပ်သော PDF များအားလုံးပို့ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ မင်းမှာရှိလား သင် "စုဆောင်း" လိုသောတူညီသောအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်းများစွာ ဖိုင်တစ်ခုတည်းနှင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
သေချာတာပေါ့ အလုပ်၏ဤအမျိုးအစားလုပ်ဆောင်ရန်တစ်ခါတစ်ရံငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာသည် ပရိုဂရမ်၏ပုံစံအတွက် tools တွေရှိပါတယ်။ အို applications များ သူတို့ကလုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်း။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါတို့ပြောမယ် စာရွက်စာတမ်းအတော်များများကိုတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ PDF format နဲ့ (သို့မဟုတ်အခြားသင်ရွေးချယ်သော) လုံးဝဘာမျှဒေါင်းလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ.
1 စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း PDF ဖိုင် ၂၀ အထိစုစည်းပါ
3 downloads သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ« ONLINE2PDF »
စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း PDF ဖိုင် ၂၀ အထိစုစည်းပါ
ဒီနေ့မင်းတို့ကိုပြောပြမယ် ဖိုင်များစွာကိုချိတ်ဆက်ခြင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဓါတ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ တစ်ခုတည်းဖိုင်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဇစ်မြစ်၏။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် PDF ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့အသုံးပြုနိုင်တယ် ဤလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးအားလုံး“ စုစည်း” နိုင်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တ ဦး တည်းအတွက်ချင်သောဖိုင်များကို။
ဦး စားပေး၊ PDFs များစွာကိုဖိုင်တစ်ခုတည်းထဲသို့ပေါင်းစည်းခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကြိုးစားခဲ့သောသူတို့သိပါလိမ့်မယ် လက်ျာကိရိယာများမပါဘဲပုံမှန်အားဖြင့်ပေးဆောင်, အဲဒါလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများစာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်သောပုံစံတစ်ခုတည်းရှိသောဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုသင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းသည်သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
ဖြေရှင်းချက် ဒီလိုပြproblemနာမျိုးအတွက် ငါတို့အွန်လိုင်းရှာတွေ့နိုင် နှင့်မည်သည့် browser ကိုမဆိုလိုက်ဖက်တဲ့ပြproblemsနာများမရှိဘဲသုံးနိုင်သည်။ မှတဆင့် သင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကဖိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုထဲသို့စုဆောင်းရန်အတွက်တစ်ချိန်တည်းတွင်စာရွက်စာတမ်း ၂၀ ကျော်ကို upload လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းမှ format အမျိုးအစားကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ဆင့်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ သင်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုသင်လိုအပ်သည့်ပုံစံသို့ပြောင်းပါ။ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် (သို့) အသုံးချပရိုဂရမ်များ install လုပ်ရန်မလိုဘဲအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်မစဉ်းစားမီသင့်“ ပြproblemနာ” ကိုဖြေရှင်းပေးမည်။ ဖိုင်များစွာနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ သင်၏အီးမေးလ်များသည်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏စာရွက်စာတမ်းများတွင်သင်မှာကြားမှုအနည်းငယ်ပိုရလိမ့်မည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုကလစ်အနည်းငယ် နှိပ်၍ လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရပါလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကနေဝဘ်ရန် https://online2pdf.com (ဂန္ www မပါဘဲ) ။ ပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြထားသောအခြေခံညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည့်အလွန်ရိုးရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ compatibility နှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်တယ် Chrome၊ Internet Explorer၊ Mozilla သို့မဟုတ် Safari, ဘယ် browser ကိုသုံးလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး
ငါတို့အဖွဲ့က ကျနော်တို့ပူးပေါင်းချင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုရွေးပါ တစ်ခုတည်းဖိုင်နှင့် "ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ" ဟုဆိုသည့်toရိယာသို့ဆွဲယူပါ။။ ငါတို့လွှတ်လိုက်ရင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဝက်ဘ်ပေါ်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဖိုင်များ၏ပုံစံသည်အရေးမကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပensionsိပက္ခမရှိဘဲကွဲပြားခြားနားသော extension များဖြင့်ဖိုင်များစွာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Online2PDF သည်ပြောင်းလဲနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပုံစံသို့ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများသို့မဟုတ်အခြား PDF များ.
အချိန်တန်ပြီ ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်များအားကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲစေလိုသည့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် သူတို့အားလုံးကိုတလုံးတည်းစုစည်းပါ ရွေးချယ်ထားသောပုံစံနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောပုံစံသို့လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည် အားလုံးရွေးချယ်ထားသောဖိုင်များကိုဖန်တီးခြင်း တစ် ဦး ချင်း တစ်ခုချင်းစီကိုတဖိုင်အသစ်ဖိုင်။
ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်များကိုပြောင်းလဲလိုသည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်နိုင်ချေအမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ မည်သို့ပင်ပုံစံရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် PDF၊ Word၊ Excel၊ Power Point၊ JPG ပုံစံ... ငါတို့တောင်သူတို့ကိုပြောင်းလို့ရတယ် EPub အများဆုံးနှင့်သဟဇာတ eBooksသို့မဟုတ်ပုံစံ ဇော်နှင့်သဟဇာတ အမေဇုံ Kindle.
ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ mode ကိုရွေးချယ်ပါ ကျွန်တော်တို့ကအသစ် (သို့မဟုတ်ဖိုင်အသစ်) ကိုဖန်တီးချင်တယ်၊ နှင့်ပုံစံ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဖန်တီးချင်သောအရာ၌ « convert »ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ « convert »ဝက်ဘ်ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်တွေပြောင်းလဲစတင်ပါလိမ့်မယ် ရွေးချယ်ထား format နဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကိုပြောင်းလဲပြီးသောအခါ ရွေးချယ်ထားသော extension နှင့်အတူဖိုင်အသစ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤတာဝန်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်ဟုသင်ထင်ခဲ့ဖူးပါသလား။
downloads သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ« ONLINE2PDF »
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း ဖိုင်တစ်ဖိုင် (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသော format ကိုပြbeနာမရှိတော့ပါ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်သည်းခံခြင်းကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ဤကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအစွမ်းထက်ကိရိယာများ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အများကြီးလွယ်ကူစေတယ်။ ထိုအအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, အခမဲ့ဖြစ်သည်!
ငါတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင်အသွင်ပြောင်းရန်ဖိုင်ပေါင်း ၂၀ အထိကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်စာရွက်စာတမ်းများထက်ပိုသောစာရွက်စာတမ်းများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ကိုသာအသစ်ပြောင်းပြီးထပ်တူလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်တာက ဖိုင် ၂၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော archive ကိုဖန်တီးပါ, ဒုတိယပြောင်းလဲခြင်းတွင်ဖန်တီးထားသောပထမဆုံးဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကိုကမ်းလှမ်းသောစံပြဖြေရှင်းချက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ဖိုင်များစွာကို PDF တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲ
Buenas tardes ။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာဒီဝန်ဆောင်မှုမှာ "လက်ဗွေရာ" အရွက်နှင့်အချို့သောစိုးရိမ်ပူပန်စေခြင်းငှါမဆိုဒေတာရှိမရှိသိလို
ဥပမာအားဖြင့်၊ လုပ်ခလစာဘဏ်နှင့်လုပ်ခလစာငွေစာရင်းကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်း ၂ ခုကိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်။
Rafa Rodríguez Ballesteros ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော်တို့ကို Pelayo ဖတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည် LOPD (ဒေတာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ) ကိုဖောက်ဖျက်သောကြောင့်မည်သည့်သဲလွန်စမျှမကျန်ရစ်ဟုယူဆကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို encrypt လုပ်ထားကြောင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းသူတို့ကပြောပြသည်။ အရာအားလုံးက၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မင်္ဂလာပါ။
Rafa Rodríguez Ballesteros အားပြန်ပြောပါ
Cubot P40 ကိုမေလ ၁၈ ရက်တွင် Budget King quad ကင်မရာဖြင့်ရောက်ရှိမည်
သင်၏ Android ဖုန်းတွင် Xiaomi ၏ "super" wallpapers ၏ "super" wallpapers ကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း